Shazam, oo ah isha tooska ah ee Apple | Waxaan ka socdaa mac
Shazam, indhaha Apple
Maaddaama Siri awood u leeyahay inuu aqoonsado heesaha, waxay u badan tahay in mararka qaarkood aad seegtay fursad aad ku aqoonsato hees sababo la xiriira sida aan macno lahayn iyo gaabis u tahay markay tahay falanqaynta heesaha aad dhageysato, ha ku xusin, inta jeer ee ay fashilanto ugu dambayntiina waanu dhamaynay rakibaadda Shazam.
Ku darista noocyada noocan ah Siri, markay wali tahay kaaliye aan macquul ahayn oo macquul ah, waxay lamid tahay isku dayga inaad qaabeeysid qaab dhismeed yar oo mashiin jajaban leh, laakiin waxay umuuqataa in Apple waligeed aysan cadeyn waxa ay doonayaan inay ku sameeyaan Siri Abuurayaasheeda ayaa tan gartay waxayna ka tageen Apple si ay u dejiyaan Bixby, mid ka mid ah caawiyeyaasha ugu fiican uguna macquulsan ee hadda suuqa ku jira.
Sida laga soo xigtay xanta badan, Apple waxay yeelan kartaa ujeedada ah inay ku dhawaaqdo maanta, iibsiga Shazam iyo sidii caadiga ahayd, afhayeenka u dhigma ayaa sheegan doona inaysan waligood ka warramin qorshayaasha mustaqbalka ee Apple ay ka leedahay shirkaddan. Qiimaha iibka, taas oo sida ay waxaa lagu xantaa inay noqon karto 9 sawir, Lama shaacin waqtigaan, sidaa darteed waa inaan sugnaa sugitaanka xogaha u dhigma si aan u ogaano lacagta ay Apple maalgashadaan shirkadaha dibedda si ay isugu dayaan inay horumariyaan Siri.
Sida loo maleynayo, fikradda iibsiga Shazam kaliya looguma talagalin in lagu hagaajiyo aqoonsiga muusigga Siri, laakiin Apple waxay dooneysaa inay ka faa'iideysato caqliga macmalka ah ee ka dambeeya Shazam iyo si kadis ah, u dhaqaaq meesha ay kaga muuqato natiijooyinka miyuusigga ee heesaha ay aqoonsan tahay, halkaasoo hadda Spotify badanaa had iyo jeer ka muuqato booska koowaad.
Haatan, aan sugno oo aan aragno sida maalintu u dhaafto, ilaa iyo waaga, California, ma ogaan doonno adigoon xaqiijin iibsigan, ama haddii ay liddi ku tahay, wax walba waxay noqdeen xan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Shazam, indhaha Apple
Giraanta cusub ee loogu talagalay Apple Watch waxay noqon doontaa "Maskaxda"
Nuqul Windows, bilaash ah wakhti xaddidan oo loogu talagalay Mac